Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. धेरै सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन भत्ता – Emountain TV
धेरै सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन भत्ता
इलाम २९ फागुन । नेपालमा ‘दुई सन्तान, ईश्वरको बरदान’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । राज्यले यसैअनुसार नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको पनि छ । तर, पूर्वी नेपालको इलाम नगरपालिका भने जनसंख्या बढाउन प्रोत्साहन भत्ता अगाडि बढेको छ । नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिको उद्देश्य भने फरक छ– उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्नु ।
नगरपालिकाले धेरै सन्तान उत्पादन गर्दा सुत्केरीलाई ‘पोषण प्रोत्साहन भत्ता’ दिने नीति नै सार्वजनिक गरेको छ । आगामी २० वर्ष भित्र उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यसहित नगरको जनसंख्या बढाउन धेरै सन्तान उत्पादन गर्दा सुत्केरीलाई ‘पोषण भत्ता नीति’ अघि सारेको हो । नगर कार्यपालिकाको बैठकले सुत्केरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ‘पोषण भत्ता’को सुविधामा परिमार्जन गरेको जनाइएको छ ।
नगरपालिकाभित्र दोस्रोपटक बच्चा जन्माउनेलाई २ हजार, तेस्रो बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई ३ हजार, चौथो बच्चा जन्माउनेलाई ४ हजार र पाँचौपटक वा सोभन्दा माथि बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई ५ हजार रुपैयाँ पोषण सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिकाले पारित गरेको ‘इलाम नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन र शिक्षा नियमावली’मा समेत कर्मचारी तथा शिक्षक–शिक्षिकाहरूले जतिपटक बच्चा जन्माए पनि पाउने सुविधामा कुनै कटौती नगरिने भएको छ ।
सरकारले दुई पटकसम्म बच्चा जन्माउने महिला कर्मचारी, शिक्षिकाहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा दिने नियम लागू गर्दै आएको छ । मेयर महेश बस्नेतले इलाम नगरबाट अन्यत्र जाने क्रम बढ्दै गएको र त्यसबाट नगरको चहलपहल घट्ने भएकोले जनसंख्या वृद्धि गर्न नगरपालिका लागि परेको बताए । उनले जनसंख्या समस्या नभइ स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
धेरै जनसंख्या भएमा नगरको व्यापारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधि बढ्ने र यसलाई परिचालन गरी नगरमा विभिन्न सेवासुविधा थप्न सकिने मेयर बस्नेतको भनाइ छ । राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको छ ।
स्थानीय तह गठनपछि नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकारकै रूपमा हेरिएको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले यसरी आ–आफ्नै व्याख्या अनुसार निर्णय गर्दै आएका छन् ।
इलाम नगरपालिकाको यो निर्णयको भने मिश्रित टिप्पणी हुन थालेको छ । अहिले पनि नगरपालिकामा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधारको राम्रो विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नगरमा जनसङ्ख्या बृद्धि गरिनु आफैँमा लज्जास्पद निर्णय भएको स्थानीयको भनाइ छ । सरकारले यसअघि जनसङख्या वृद्धिदर घटाउन बिभिन्न उपाय अपनाउँदै धेरै लगानी गरेको छ । तर, सरकारी नीति विपरित नगरपालिकाको निर्णयले स्थानीय अचम्मित छन् ।
गरिवलाई यस निर्णयले झनै गरिब बनाउने नेपाल महिला संघ इलामकी अध्यक्ष निर्मला सञ्जेलको भनाई छ । अशिक्षित मानिसलाई डुनाउने निर्णय भएको उनको तर्क छ । महिलाहरुले यस निर्णयको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् । आफुहरुलाई मान्छे उत्पादन गर्ने मेसिन नसम्झन उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । भोट बचाउन यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरुले यस निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । अलोकप्रिय निर्णय भएको सुनिता कर्माचार्य वताउँछिन् ।